Tobago: Yepamutemo COVID-19 Yekushanya Kugadziridza
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo » Tobago: Yepamutemo COVID-19 Yekushanya Kugadziridza
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trinidad neTobago Breaking News • Akasiyana Nhau
Dai 6, 2020
Sezvo indasitiri yepasirese yekushanya neyekushanya ichiramba ichikwikwidzana nedenda riri kuenderera mberi reCOVID-19, iyo Tobago Tourism Agency Limited (TTAL) yakatanga chirongwa chedigital chekuunza tariro yakanaka netariro kunharaunda yavo yepasi rose yekufamba, uye kukurudzira zvakapfuura uye vashanyi venguva yemberi kuchengetedza "Kurota kweTobago".
Mushandirapamwe wekushambadzira uyu weTTAL haungotsvake chete Tobago pamberi pevashanyi kusvika chitsuwa ichigona kuvhura bhizinesi zvakachengeteka, asi zvakare iri meseji yekubatana nenharaunda yepasirese yekufamba. Tobago inobatana nenzvimbo dzekushandira pamwe nemasangano anoshanda pasirese - kusanganisira yeCaribbean Tourism Organisation, World Travel uye Tourism Council uye World Tourism Organisation - mukuparadzira meseji yakabatana yekushinga, tariro, uye kuzvipira kuronga nzira inoenda kumberi muindasitiri kune kupenya mangwana.
#KurotaOfTobago ndeye 100% mushandirapamwe-unogadzirwa unotsvaga kutaura nyaya yeTobago kuburikidza nemeso evashanyi vayo vekare nevagari vemazuva ano. Kuburikidza nemushandirapamwe uyu, TTAL icharatidza chitsuwa ichi kuburikidza nekutora mifananidzo inokatyamadza, mavhidhiyo anotora moyo uye zvipupuriro zvisina basa, kuitira kuti nzvimbo yacho irambe iri pamusoro pendangariro kune vashanyi vematunhu nevekunze mukati me Covid-19 dambudziko uye kupfuura.
Mushure me "nyoro-kuvhurwa" pakutanga kwaKubvumbi, muna Chivabvu 2020 iyo Tobago Tourism Agency Limited yakaparura zviri pamutemo chirongwa che #DreamingOfTobago neiyo pfupi vhidhiyo vhidhiyo yekuzivisa mushandirapamwe pamapuratifomu avo epamhepo. Inoratidzira inoshamisa yemuchadenga uye yepasi pemvura mifananidzo yeasina kuvharwa Tobago, vhidhiyo inokoka vepamhepo yekufambisa nharaunda kuti vabatanidze nhaurirano uye vagovane zvavo ndangariro vachishandisa yepamutemo hashtag #DreamingOfTobago, uku vachiparadzira meseji yetariro nekuchengetedza chishuwo chekufamba chiri chipenyu.
Louis Lewis, CEO weTTAL akati: "Chinangwa chedu nemushandirapamwe uyu ndechekuchengetedza nzanga yedu yepasi rose yakabatana uye nekufemerwa nezviyeuchidzo zvezviitiko zvekuenda kuTobago. "Kurota nezveTobago" kunopa chikuva chekugovana, kubatana, uye pamwe chete kutarisira ramangwana kana vashanyi vachikwanisa kuenda kuTobago isina kuvharwa, isina kubatika, isina kuzivikanwa zvekare. "